गोपाल गुरुङको स्मरण | eAdarsha.com
गोपाल गुरुङको स्मरण
पोखरा । समाजसेवी गोपाल गुरुङको प्रथम स्मृति दिवस शुक्रबार मनाइएको छ । पोखरास्थित पञ्चकोशी समाज घरमा एक कार्यक्रम गरी उनको स्मरण गरिएको हो ।
कार्यक्रममा पञ्चासे बुद्ध विहारका प्रमुख मीन गुरु, शिक्षासेवी शेरबहादुर गुरुङ, बाह्बीसे पंैगिलामा परिवार पोखराका अध्यक्ष ना.सु. कुलबहादुर गुरुङ र समितिका सचिव चिजकाजी गुरुङले स्व. गुरुङको योगदानको चर्चा गरे ।